မြောက်ကိုရီးယား၏ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုကို အမေရိကန်ရှုတ်ချ ၊ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆို - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက တာဝေးပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံက စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ရှုတ်ချလိုက်ပြီး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်အတူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားရာတွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ရှုတ်ချကြောင်း ၊ “ ယင်းဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုသည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမျိုးမျိုးချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် အခြားသော နိုင်ငံတာအသိုင်းအဝန်းအတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း” မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး ဖော်ဆောင်ရန် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား သံတမန်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှုကို ဆက်လက်ကတိကဝတ်ပြုထားဆဲဖြစ်ကြောင်း Price က ဆိုသည်။
“ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အတူ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ၊ လေးနက်တည်ကြည်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ကို ရှင်းလင်းတဲ့ သတင်းစကားတစ်ခုပါးထားပြီးသားပါ ၊ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။
အမေရိကန်၏ ဒေသတွင်း မဟာမိတ်များအပေါ် ထားရှိသော ကတိကဝတ်မှာ မပြောင်းမလဲ ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရှိကြောင်းလည်း Price က ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေဖြင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန် ထပ်ဖန်တလဲလဲ အကြံပြုတိုက်တွန်းထားသည်။ သို့သော် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအား ရုပ်သိမ်းပေးရန်မူ စိတ်ဆန္ဒမတွေ့ရပေ။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက်ရေပြင်တွင် တာလတ်ပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်နှစ်စင်းကို စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်က စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားက အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော တာဝေးပစ် ခရုဇ်ဒုံးကျည်ကို ပြီးခဲ့သော စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များက စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် နှစ်ရက်အကြာတွင် အဆိုပါ တာလတ်ပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှု ထပ်မံ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ယင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပင် တောင်ကိုရီးယား သမ္မတအိမ်ပြာတော်က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းထုတ် ရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်မှ နေ၍ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်စမ်းသတ်ပစ်လွှတ်မှုတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
WASHINGTON, Sept. 15 (Xinhua) — The United States on Wednesday condemned ballistic missile launches by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), calling on Pyongyang to engage in meaningful dialogue with Washington.
State Department spokesperson Ned Price told reporters inabriefing that the United States condemns the DPRK missile launches, noting “these missile launches are in violation of multiple UN Security Council resolutions … they poseathreat to the DPRK’s neighbors and other members of the international community.”
“We call on the DPRK to engage inameaningful and substantive dialogue with us,” he added. “We’ve been very clear in the messages that we have conveyed to the DPRK that we stand ready to engage in that dialogue.”
Price also reaffirmed that U.S. commitment to regional allies is ironclad.The Biden administration has repeatedly suggested that it seeks to engage with Pyongyang over the denuclearization issue but showed no willingness to ease sanctions. South Korea’s Joint Chiefs of Staff said Wednesday that the DPRK fired two short-range ballistic missiles into eastern waters.
Combo photo provided by the Korean Central News Agency (KCNA) on Sept. 13, 2021 shows the test-launches of long-range cruise missiles in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) on Sept. 11 and Sept. 12 respectively. (KCNA via Xinhua)